६ दिनमा ५ करोडले हेरेको ललितपुरको भाइरल डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउ, ज्यान जोखिममा राखेर यस्तो गर्छन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 6, 2021 April 6, 2021 AdminLeaveaComment on ६ दिनमा ५ करोडले हेरेको ललितपुरको भाइरल डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउ, ज्यान जोखिममा राखेर यस्तो गर्छन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
ललितपुर । अहिले यो टिकटक, फेस्बुक र युटयुबको जमानामा कतिबेला के भाईरल हुन्छ भन्ने कुराको केही अतोपतोनै हुदैन । आज हामी त्यस्तै रिपोर्ट लिएर आएका छौ, जुन टिकटकको १० सेकेन्डको भिडियोलाई ६ दिनमा नेपाली दर्शक तर प्राय बिदेशी दर्शकहरुले गरेर ५ करोडले हेरेर कमेन्ट गरे कुन ठाउ हो ? र यो कहा“ छ भनेर बिदेशीहरुका कमेन्ट यति धेरै आएकी जहा कमेन्ट गरेकै पोस्टमा ८०—९० हजार लाइक पनि पुग्यो ।
यसबारे बुझदै जादा हामीले ठाउ“ पता लगायौ जुन ठाउ रहेको रहेछ ललितपुरको धोबीघाटको मलपोखरी भनेर चिनिने रहेछ । पहिला यस ठाउमा ठूलै पोखरी रहेको स्थानियबासीहरुले जानकारी दिएका छन र बिस्तारै यसमा ढल आएपछि यसरी घासमाथिनै हिडन मिल्ने र घास हल्लिएर जमिन पनि हल्लिने जानकारी दिएका छन,
भिडियोमा हेरौ यो अचम्मको ठाउ र स्थानियले के भन्छन्ः